Tora Afterlight mahara neApple Store application | IPhone nhau
Paul Aparicio | | Kutengesa
Nhasi takakuzivisai kuti mumwe wemitambo yakanakisa muApp Store waive kuve wakasununguka kekutanga kubvira zvawakagara muchitoro cheApple. Monument Valley ingangove iko kushandiswa kwevhiki uye, kana zvikazoitika kuti ndizvo, haizove iko chete kunyorera kuri chikamu chekusimudzirwa kweApple, nekuti kubva nhasi tinogona zvakare kuwana iyo Afterlight app yakasununguka zvachose, asi isu tichafanirwa kuitora kubva kuApple Store application.
Izvo zvakakosha kusimbirira kuti kuti uwane rusununguko Afterlight kusvikira kusimudzira kwapera, isu tinofanirwa kuitora kubva kuApple Store application, kwete kubva kuApp Store. Yekutanga iApple hardware chitoro, kwatinogona kutenga iPhone, Mac kana chero chishandiso pablock; yechipiri chitoro cheApple. Heano matanho ekutevera kuti uwane Afterlight mahara.
Maitiro ekurodha Afterlight mahara
Isu tinovhura iyo Apple Chitoro application. Zvakakosha kuti usazvivhiringidze neApp Store.
Tinotsvedza. Kwatinoona mapoinzi matatu, tinotsvedza kuruboshwe kusvikira taona kukwidziridzwa.
Tinobaya paAfterlight icon.
Isu tinobata mavara machena aine girini kumashure iyo inoti Dhawunirodha mahara. Tichafanirwa kusimbisa nekuisa password yeApple ID yedu.
Takabata pamusoro pekudzikinura.
Kune avo vasingazvizive, Afterlight chikumbiro chinotibvumidza isu gadzirisa mifananidzo yedu kuchinja musiyano, kujekesa, ruvara, shandisa mafirita, nezvimwe. Icho hachisi chikumbiro chakakwana sePixelmator kana Chiedza, asi hachidi icho kana, kune rimwe divi, mutengo waro kunze kwekusimudzira wakanyanya kuderera, kugara pa € ​​0,99 Afterlight inovavarira kugadzirisa mifananidzo yedu pasina kushandisa maturusi kuvaremadza, chimwe chinhu chinowana zvakakwana. Edza uye iwe uchandiudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Tora Afterlight mahara neApple Store app. Tinokuratidza sei
Jeff Rodriguez akadaro
Ini handikwanise kusvika kuApple shop app. Unoziva here kuti nei?
Pindura kuna Jeff Rodriguez
Ini handisi kana kuona zvikamu zvepoint 3, handizive kuti nei
Handikwanise kuzviitira mumwe munhu kuti andibatsire.
Hugo sanz akadaro
Izvo zvinoitika ndezvekuti vanofanirwa kushandura nzvimbo yenyika yavo uye ini ndinoichinja kubva kuMexico kuenda kuSpain uye ikoko ini ndawana iko kunyorera sezviri mumufananidzo uri pamusoro, chinja Nzvimbo.
Ndiri kutotora iyo yemahara app
Pindura Hugo Sanz
Mufananidzo wakanaka Pablo, ndinoifarira ndinoifarira hahahahaha
xD yangu iPad Wallpaper. Inobuda kunze uko nekuti iri mumifananidzo yangu yekushambadzira}: o)
PS: iwo akaongororwa mafoto ndiwo kumeso kwangu kutenderera. Ini ndinotobuda nemakeup ekugadzira echinyorwa chandinofanira kuita xd iwo mafoto haazombove pachena xd
Dhongi dhongi ...
LinkedIn inoburitsa inogadziridza yeIOS neshanduko dzakakosha
A WhatsApp bug inokutadzisa kunyora mumapoka